परिमार्जन हुँदै इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम, एम्एससीमा तीन र बी.ई.मा दुई नयाँ कार्यक्रम थपिने
विशेष कार्यक्रम पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छाैँ: सहायक डिन प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्य
इन्जिनियर्स नेपाल | माघ १७, २०७६, काठमाडौं
प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन र खपत त्यस देशको पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको हुन्छ । साथै, इन्जिनियरलाई देशको भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने प्राविधिकको रुपमा समेत लिइन्छ । नेपालमा वर्षेनी करिब पाँच हजार इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन् । देशको मार्गचित्र कोर्ने जिम्मा पाएका इन्जिनियरलाई सोहीअनुसारको व्यावहारिक शिक्षा दिइएको छ या छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण ठहरिन्छ । जुन कुरा सिधै गएर पाठ्यक्रमसँग जोडिन्छ ।
तर, नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ शिक्षाको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पाइँदैन । त्यसमध्ये पनि देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम दशकअघिदेखि परिमार्जन हुनसकेको छैन । विद्यार्थी तथा प्राध्यापकले यस कार्यक्रममा पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
नियमानुसार प्रत्येक पाँचदेखि १० वर्षभित्र पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्ने हो । तर, बी.ई. (ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ) को पाठ्यक्रम परिमार्जन नभएको १० वर्ष नाघिसकेको छ । यसअघि सन् २००९ र सन् १९९९ मा पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको थियो । मास्टर्सको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी बी.ई. र दुई वर्षभित्र मास्टरको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै छ ।
परिमार्जनको काम अन्त्यतिर
पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)ले विभिन्न विशेष समिति बनाएर धमाधम काम थालिरहेको छ । यससँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका इन्जिनियरिङ क्याम्पसको दशक पुरानो पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने पक्का भएको छ । बी.ई.को पाठ्यक्रम यसै वर्ष र मास्टर्स तहको आगामी वर्ष परिमार्जन हुने आईओईको योजना शाखाका सहायक डिन प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
हाल बी.ई.मा पढाइ हुँदै आएका १२ मध्ये दशकदेखि परिमार्जन हुन नसकेका सबै पुराना पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनलागेको आईओईले जनाएको छ । पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सम्बन्धित कार्यक्रम विज्ञ राखेर आठवटा कार्यक्रम समिति बनाइएको थियो । समितिले दिएको सुझावका आधारमा समयसापेक्ष रुपमा पाठ्यक्रम परिमार्जन भइरहेको र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीले परिमार्जित पाठ्यक्रम पढ्न पाउने आईओई योजना शाखा प्रमुख भृगुदेवी सापकोटाले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय विश्वबजारमा हात चलाउनेभन्दा पनि स्मार्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने गरी पाठ्यक्रमहरु बनिरहेका छन् । हामीले पनि त्यसलाई मनन गरेर अगाडि बढ्दै छौँ ।’
मास्टर्सको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि समिति बनिसकेको छ । काम भने सुरु भइसकेको छैन । बीईको काम सकिएपछि मास्टर्सको काम सुरु हुने प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिइन् । मास्टर्समा हाल २७ कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।
मास्टर्सको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि डिटेलिङ
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मास्टर्सको पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुने भए पनि परिमार्जनको तयारीस्वरुप डिटेलिङको काम भने हुने भएको छ । मास्टर्सको कार्यक्रमहरुलाई आधार मानेर पाठ्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ । अब आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रत्येक कार्यक्रमको बुकलेट विद्यार्थीको हातमा पर्नेछ ।
परिमार्जन गर्नलाई पहिला एकीकृत पाठ्यक्रम आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले आईओईसँग त्यो पनि छैन । त्यसकै आधारमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिने हुँदा पहिला एकीकृत गर्न लागेको सिभिल इन्जिनियरतर्फका कार्यक्रम समिति संयोजक प्रा.डा. नरेन्द्रमान शाक्यले जानकारी दिए । यसअन्तर्गत पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक ढंगले बुकलेटमा राख्ने काम हुनेछ ।
संयोजक शाक्यले भने, ‘बीईसँगै मास्टर्सको पाठ्यक्रम परिमार्जनको आवश्यकता पनि निकै छ । आवाज उठिरहेको छ । तर, पाठ्यक्रमलाई पहिल्यै प्रमाणित गर्ने, कार्यक्रमहरु एकीकृत गर्ने काम नभएसम्म त्यो सम्भव छैन । त्यसैले यस वर्ष यो काम सकेर अर्को वर्ष परिमार्जनतर्फ लाग्छौँ ।’
मास्टर्समा तीन कार्यक्रम थपिँदै
त्रिविले नर्वेजियन युर्निभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग सहकार्य गरेर सन् १९९६ देखि तीनवटा कार्यक्रम राखेर मास्टर्स तहमा पढाइ सुरु गरेको थियो । हालसम्म आउँदा ती कार्यक्रमहरु २७ पुगेका छन् । त्यसमा पनि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि तीनवटा कार्यक्रम थपेर ३० पु¥याउने तयारी भइरहेको छ ।
थप गर्न लागिएका तीन कार्यक्रममध्ये ‘रक एन्ड टनेल इन्जिनियरिङ’लाई महत्वका साथ हेरिएको छ । टनेल इन्जिनियरिङको पढाइका लागि संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेष चासो देखाएको थियो ।
‘नेपालमा सुरुङमार्गको आवश्यकता र महत्व औँल्याउँदै सरकारले आईओईलाई सुरुङविज्ञ तयार पारिदिन आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुरुप आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हामी पोखरामा यसको पढाइ सुरु गर्दै छौँ’, सहायक डिन बज्राचार्यले इन्जिनियर्स नेपालसँग भने ।
यसै कात्तिकमा नेपाल र विदेशमा रहेका टनेल क्षेत्रका नेपाली विज्ञहरुको सहभागितामा टनेल इन्जिनियरिङको आवश्यकता र भविष्यमा यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे वर्कशप भएको थियो । यातायातमा मात्र नभएर हाइड्रोपावरमा समेत टनेल चाहिने हुँदा नेपालमै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा सहभागी विज्ञहरुले राखेका थिए । सोहीअनुसार आईओईले टनेलिङ इन्जिनियरिङ कार्यक्रम थप्न अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, २०७७ सालको वैशाखमा सुरु हुने नयाँ सत्रमा ‘मास्टर्स इन आर्किटेक्ट’ र ‘मास्टर्स इन जियोम्याट्रिक’ कार्यक्रम पनि थप गरिँदै छ । नेपालमा आर्किटेक्ट अध्ययन सबैभन्दा पुरानो कार्यक्रम भएको र विद्यार्थी संख्या अत्यधिक रहेको भए तापनि हालसम्म आर्किटेक्टमा बीई गरेका विद्यार्थीका लागि मास्टर्समा सोहीअन्तर्गतको विशेष कार्यक्रम थिएन । अबको शैक्षिक सत्रदेखि भने आर्किटेक्टमै मास्टर्स गर्न विदेश जानुपर्ने झन्झठ हट्ने भएको छ ।
जियोम्याट्रिकमा पनि मास्टर्स पढ्ने व्यवस्था हाल छैन । हरेक स्थानीय तहमा भूमिसुधारको शाखा छ । त्यसका लागि नापीको काम गर्ने सर्भे अध्ययन गरेका इन्जिनियर आवश्यक पर्छन् । बीईमा यो कार्यक्रमको आकर्षण बढ्दो छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सर्भे इन्जिनियरको मागलाई ध्यानमा राखेर आईओईले मास्टर्स तहमा पनि यसको पढाइ सुरु गर्नलागेको हो ।
बीईमा दुई कार्यक्रम थपिने पक्का
बीई तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि दुई वा तीन नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने गरी गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
‘माइन एन्ड मेट्रोलोजी’ र ‘ब्याचलर इन प्लानिङ’ कार्यक्रम थप गर्ने लगभग पक्कापक्की भइसकेको आईओईले जनाएको छ । बीईमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि १२ बाट बढाएर १५ कार्यक्रम पु¥याउने लक्ष्य आईओईको छ । तर, यी दुईबाहेक अर्को कुन कार्यक्रम थप गर्ने भन्नेबारे भने गृहकार्य भइरहेको छ ।
नेपालमा खानीमा काम गर्ने जनशक्ति अभावलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्षदेखि ‘माइन एन्ड मेटोलोजी’ कार्यक्रमको पढाइ सुरु गर्न लागिएको आईओईले जनाएको छ । नेपालमा रहेका युरेनियमदेखि हरेक प्रकारका खानीको उत्खननमा प्रयोग गर्ने गरी जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्यसहित पढाइ सुरु गर्न लागिएको योजना शाखा प्रमुख सापकोटाले इन्जिनियर्स नेपाललाई जानकारी दिइन् ।
विभिन्न अध्ययनले हाल नेपालमा दुई सयको हाराहारीमा खानी इन्जिनियरको आवश्यकता औँल्याएको छ । अहिले त्यो आवश्यकता विदेशी जनशक्तिले पूर्ति भइरहेको छ ।
त्यस्तै, हरेक निर्माण क्षेत्रमा योजना आवश्यक हुने भएकाले ‘ब्याचलर इन प्लानिङ’ कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि थप गर्न लागिएको आईओईले जनाएको छ ।
त्रिविसँगै नेपालमा रहेका पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि समय–समयमा आफ्ना पाठ्यक्रमहरु परिमार्जन गर्दै आइरहेका छन् । तर, यी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पनि अझै समयसापेक्ष हुन नसकेको गुनासो बेला–बेला विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुबाटै सुन्ने गरिन्छ ।
सिभिल र आर्किटेक्ट विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा हुने गर्छ । यस कार्यक्रम पढ्ने इन्जिनियर धेरै छन् । त्यसैले आईओईले नयाँ कार्यक्रम थपेर इन्जिनियरिङको दायरा फराकिलो बनाउने काम गरिरहेको छ । कमेकिल इन्जिनियरिङ त्यसको उदाहरण हो । यो कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि बीईमा पढाइ भइरहेको छ । जसमा ४८ जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, हामीले एरोस्पेस इन्जिनियरिङको पढाइ पनि सुरु गरिसकेका छौँ ।
विशेष कार्यक्रम पढ्न विदेशमा जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सरकार र नेपाललाई आवश्यक जनशक्तिको दूरगामी प्रभावलाई हेरेर पछिल्लो वर्ष हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भइसकेको छ । आगामी दिनमा रेल्वे इन्जिनियरिङको पढाइका लागि समेत विज्ञहरुसँग छलफल चलिरहेको छ । त्यस्तै अब आउने शैक्षिक सत्रदेखि बीई र त्यसपछि मास्टर्सको पाठ्यक्रम पनि परिमार्जनसहित विद्यार्थीले पढ्न पाउनेछन् । पछिल्लो समय विश्वबजारमा टुल्स एन्ड टेक्निक्सका आधारमा पाठ्यक्रमहरु बनाइएका छन् । परिमार्जनका क्रममा हामीले पनि यी कुरामा ध्यान दिनेछौँ ।
इन्जिनियर्स नेपाल मासिक पत्रिकाबाट
कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोर्‍याउनुपर्ने इन्जिनियर उपाध्यायको धारणा
इ.अ.स.को परीक्षा पुन: स्थगित, भाद्र - १ बाट नयाँ सेमेष्टरको अनलाइन कक्षा संचालन हुने